Tsy matahotra varotra | Martech Zone
Alarobia, Jona 19, 2019 Alarobia, Jona 19, 2019 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity dia niara-nipetraka tamina tompona orinasa iray niara-niasa tamina tetikasa vitsivitsy aho. Tena manan-talenta izy ary manana orinasa mitombo izay mandeha tsara. Amin'ny maha orinasa kely azy dia fanamby izy amin'ny fandanjalanjana tsara ny kalandrie sy ny teti-bolany.
Nanana fifamofoana lehibe izy izay nokasaina hampiasana mpanjifa vaovao tampoka tampoka. Nametraka ny fahasalaman'ny orinasany ho tandindomin-doza izany satria nanao famatsiam-bola tamin'ny fitaovana ilaina amin'ny asa izy. Tsy noeritreretiny velively fa ho tafahitsoka izy… tsy hoe tsy misy fidiram-bola akory, fa miaraka amin'ny fandoavana ny volan'ny fitaovana.
Roa herinandro lasa izay, tsy nahalala ny olana mahazo azy aho. Nanontany ny torohevitro momba ny tranokalany izy satria tsy niovaova tsara ary noteteziko hamakivaky ny vanim-potoana fanatanjahan-tena. Niasa tamin'ny atiny izy ary hamorona fampidirana video fohy ihany koa.
Rehefa nanara-dia azy aho tamin'ity herinandro ity dia nanokatra ny toe-javatra nisy azy izy. Nanontany aho hoe inona no ataony amin'izany. Nilaza izy fa miasa eo amin'ilay tranonkala, miasa amin'ny horonan-tsary, ary miasa amina fampielezan-kevitra amin'ny mailaka ho an'ny mpanjifany.
Antsoy izy ireo
Nanontany aho hoe: "Niantso ny mpanjifanao va ianao?".
"Tsia, hanaraka aho aorian'ny andefasako ity fampielezan-kevitra amin'ny mailaka ity.", Hoy ny navaliny.
"Antsoy izy ireo izao.", Hoy ny navaliko.
"Marina? Inona no holazaiko? ”, Hoy izy nanontany… manahy ny amin'ny fiantsoana ny manga.
“Lazao azy ireo ny marina. Antsoy izy ireo, ampahafantaro azy ireo fa manana banga amin'ny fandaharam-potoananao avy amina mpanjifa tsy ampoizina mandao. Ampahafantaro azy ireo fa nahafinaritra anao ny niara-niasa tamin'izy ireo tamin'ny fifanarahana taloha ary misy fotoana vitsivitsy hitanao hiara-miasa amin'izy ireo. Angataho izy ireo mba hivory miaraka aminy mba hiresaka momba ireo fotoana mety ireo. ”
“Miomana fivoriana eto aho afaka adiny iray, hiantso aho aorian'izany.”
“Sahirana ny orinasanao ary manao fialantsiny ianao. Afaka manao antso an-tariby iray ianao dieny izao alohan'ny fivoriana. Fantatrao ary fantatro izany. ”
“Matahotra aho,” hoy izy.
“Matahotra antso an-telefaona mbola tsy nataonao ianao raha tandindomin-doza ny asanao?” Nanontaniako.
"Okay. Ataoko izany. ”
20 minitra teo ho eo taty aoriana dia nandefa sms azy aho mba hahitana hoe nanao ahoana ny fiantsoana. Faly izy… niantso ny mpanjifa izy ary misokatra amin'ny fotoana hiarahan'izy ireo miasa indray. Nametraka fivoriana fanaraha-maso ao amin'ny biraony izy ireo amin'ity herinandro ity.
Tahaka ny mpiara-miasa amiko etsy ambony, matoky aho amin'ny fahaizako manampy ny mpanjifako saingy ny fizotry ny varotra sy ny fifampiraharahana dia mbola zavatra tsy tiako… saingy vitako izany.
Taona maro lasa izay, my mpanazatra varotra, Matt Nettleton, nampianatra ahy lesona sarotra iray. Nasainy naka ny telefaona teo alohany aho ary nanontany ny ho avin'ny raharaham-barotra. Nahazo fifanarahana goavambe aho tamin'io antso io izay nipoitra tampoka ny ahy orinasan-tsaina amin'ny marketing.
Tiako ny haino aman-jery nomerika… atiny, mailaka, media sosialy, horonan-tsary, dokambarotra… misy tombony lehibe azo avy amin'ny fampiasam-bola… rahampitso. Saingy tsy hanidy anao fifanarahana izany amin'izao fotoana izao. Mety ho afaka hivarotra widgets sy tapakila ary fifampiraharahana kely hafa ianao amin'ny alàlan'ny media nomerika. Fa raha tsy mifandray manokana amin'ny prospect amin'ny alàlan'ny telefaona na amin'ny olon-kafa ny orinasanao dia tsy hanakatona ny varotra lehibe ilain'ny orinasanao ianao.
Volana vitsivitsy lasa izay dia tao anatin'ny toe-javatra toy izany aho. Izaho dia nanana mpanjifa lehibe nampandre ahy fa very famatsiam-bola izy ireo ary tsy maintsy mampihena be ny tetibolantsika. Tsy tao anaty olana ara-bola aho… ary nanana lisitr'ireo orinasa efa nifandray tamiko nitady fanampiana aho. Saingy sarotra ny mpanjifa vaovao mirongatra, sarotra ny manorina fifandraisana ary tsy manana tambiny amin'ny fampiasam-bola tsara indrindra. Ny fahazoana mpanjifa vaovao dia tsy zavatra antenaiko.
Ho solony, nihaona tamin'ny tsirairay amin'ireo mpanjifako ankehitriny aho ary nilaza ny marina momba ny elanelam-bidiko izay antenaiko hamboarina. Tao anatin'ny herinandro dia namerina nifampiraharaha fifanarahana tamina mpanjifa manan-danja aho ary nanolotra tolotra fanindroany avy amin'ny mpanjifa hafa hanitatra ny fifamofoanan'izy ireo. Ny hany nilaiko dia ny nifandraisako tamin'izy ireo manokana, nampahafantatra azy ireo ny toe-javatra, ary nametraka ny vahaolana teo ambony latabatra niaraka tamin'izy ireo.
Tsy mailaka, horonan-tsary, fanavaozana ara-tsosialy, na doka izany. Nila antso an-tariby na fihaonana tamin'izy tsirairay avy mba hanatanterahana izany.
Fitokonana telo… Manaraka
Fanarahana iray momba an'io. Mila mitandrina ianao amin'ny fampiasam-bola amin'ny andronao rehetra amin'ny fanantenana mety tsy hanakaiky mihitsy. Azonao atao ny mandany fotoana be loatra amin'ny varotra izay tsy mamokatra.
Raha manana fifandraisana manokana amin'ny client na prospect ianao - mety ho ratsy kokoa aza. Tian'izy ireo ianao ary te-hanao raharaham-barotra aminao, saingy mety tsy afaka. Mety ho fotoana, teti-bola, na antony maro hafa. Tsara loatra ry zareo raha mampahafantatra anao fa tsy hitranga izany. Ny zavatra farany tianao hatao dia ny mandroaka azy ireo ary mampidi-doza ny fifandraisana.
Namako akaiky iray izay mivarotra orinasa no nilaza tamiko fa nahazo fitsipiky ny fitokonana telo izy. Hiantso na hihaona amin'ny vinavinany izy, hamantatra fa misy filàna ary hanolotra vahaolana. Avy eo dia nikasi-tanana telo manokana izy mba hanandramana hanatratra "Tsia". na hanidy ny fifanarahana.
Raha tsy manidy izy dia mampahafantatra azy ireo fa mandroso izy ary afaka miantso azy ireo izy ireo raha misy na eo izany ny filàna. Hiverina sy hanaraka izy amin'ny farany, fa raha tsy hikatona ao anatin'ny fivoriana vitsivitsy izy ireo dia tsy vonona ny hanao raharaham-barotra miaraka amin'ny… amin'izao fotoana izao.
Raha mila orinasa ianao dieny izao dia mila miantso dieny izao.